Waa Ayo Addoonka Aamminka ah oo Caqliga leh?
Cuntadeenna ruuxiga ah innaga oo dhan way ina anfacdaa
Intuunan Ciise dhiman si keli ahaan ah buu ula hadlay Butros, Yacquub, Yooxanaa iyo Andaros oo ka mid ahaa xertiisii. Suʼaal muhim ah buu weyddiiyay oo ku saabsan calaamadda imaatinkiisa maalmaha ugu dambeeya. Wuxuu ku yiri: “Haddaba yuu yahay addoonka aaminka ah oo caqliga leh, kan sayidkiisu dadka gurigiisa u sarreeysiiyey inuu cuntada siiyo wakhtigeeda?” (Matayos 24:3, 45; Markos 13:3, 4) Ciise isagii oo ‘sayidkoodii’ ah buu u ballanqaaday inuu maalmaha ugu dambeeya dooran doono kuwo ka mid ahaan doono addoonkan. Kuwaasi si joogta ah bay raacayaashiisa u siin doonaan cunto ruuxi ah oo xoojisa xiriirkay Ilaahay la leeyihiin. Bal yaa ka mid ahaan doona addoonkan?
Waa koox yar oo ka mid ah raacayaasha subkan oo Ciise. Maanta ‘addoonku’ waa koox yar oo subkan oo ah Guddiga Maammulka ee Markhaatiyaasha Yehowah. Guddigan kuwa Yehowah la caabudo bay waxbarashada Kitaabka ku quudiyaan. Aad baan ugu baahan nahay inuu addoonkan aamminka ah ina siiyo qaybteenna cuntada ah waqtigeeda.—Luukos 12:42.
Guriga Ilaah bay maammulaan. (1 Timoteyos 3:15) Ciise addoonka wuxuu siiyay xilka weyn oo ku saabsan hawsha ururka duniyeed ee Yehowah. Hawshan waxaa ka tirsan habaynta lacagaha iyo hantida iyo qorshaynta wacdiga iyo waxbaridda kiniisadaha. “Addoonka aaminka ah oo caqliga leh” wuxuu qaybiyaa cunto ruuxi ah oo aan ka helno wargeysyada wacdiga aan u isticmaalno iyo waxbarashada shirarka iyo kulammada. Markuu sidaa yeelo waxaan helnaa waxaan u baahan nahay markaan u baahanno.
Addoonka si aammin ah buu u xajiyaa runta Kitaabka iyo amarkiisa ku saabsan wacdiga warka wanaagsan. Caqli buuna leeyahay waayo si xigmad badan buu u tixgeliyaa danaha Ciise ee dunida. (Falimaha Rasuullada 10:42) Yehowah hawshiisa wuu barakeeyay oo waxbarashada iyo dadkaba way sii kordhayaan.—Ishacyaah 60:22; 65:13.
Yuu Ciise u doortay inuu raacayaashiisa siiyo cuntada ruuxiga ah?
Sidee buu addoonka aammin u yahay oona caqli u leeyahay?
Wadaag Wadaag Waa Ayo Addoonka Aamminka ah oo Caqliga leh?